Messi oo ka mid ah gooldhaliyaasha xilli Barcelona ay guul la soo laabatay. - Somgoal
Home Laliga Messi oo ka mid ah gooldhaliyaasha xilli Barcelona ay guul la soo...
Lionel Messi ayaa dhaliyey 20 gool xilli ciyaareedkiisii 12aad oo isku xiga. Shanta horyaal ee ugu sareeya Yurub, ma jiro ciyaaryahan kale oo gaaray ugu yaraan 20 gool oo horyaalka ah dhammaan 12kii ololahaas (2008-09-2019-20).
Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay mid kasta oo ka mid ah 11kii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay (18 gool ayuu u dhaliyay Man United xilli ciyaareedkii 2008-09).
Previous articleXanta suuqa kala iibsiga: Sancho, Havertz, Aubameyang, James, Thiago Silva, Hojbjerg.
Next articleCiyaarta qiimaheedu yahay £100 Million oo maanta dhacaysa